विचरी उषाले त्यो दिन चटपटे खानु नै कालो दिन बन्यो ! सबैलाई छोडेर गईन सदासदाको लागि – NepalajaMedia
January 29, 2021 86
भक्तपुर – भक्तपुरमा गर्मी छल्न एक जोडी साझँपख घरबाट बाहिर घुम्न निस्किए । तर अकस्मात संगै जिउने बाचा बन्धनलाई साथ दिने जिवनसंगीनीको अकल्पनीय मृत्यु हुन पुग्यो । श्रीमतीको मृत्युपछि श्रीमान ग हिरो चो टमा छन् । उनका जिन्दगीका धेरै कुरा अधुरो हुन पुग्यो ।
दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका– ५ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर नगरपालिका– ३ गठ्ठाघर बस्दै आएका ४२ वर्षका रामकृष्ण बस्नेत आफ्नी श्रीमती (३८ वर्ष) उषा बस्नेतको अकल्पनीय मृत्युले पी डामा छन् । मंगलबार साझँ घरबाट बाहिर घुम्न निस्किएका रामकृष्ण र उषाले गर्मी मौसममा जुस पिए । केहीबेरपछि श्रीमतीले चटपटे खाने भनिन् । रामकृष्णले श्रीमतीको इच्छा टार्न सकेनन् ।
फेरी उनीहरुबीच सल्लाह भयो ‘आज घरमा खाना नपकाउने मःम लगेर खाने’ । त्यसको केही समयमा नै उषाले श्रिमानलनई छाती दुखेको सुनाइन् । रातोपाटीसंग कुरा गर्दै रामकृष्णले भने ‘उनले त्यसो भनेपछि हामी अस्पताल आयौं’गठ्ठाघरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा रामकृष्णले उषालाई लगे । उषा हिँडेरै आकस्मिक कक्षमा पुगेकी थिइन् ।
अस्पतालकी नर्सले उषालाई बेडमा बस्न अनुरोध गरीन् । उषाले आफ्नो स्वास्थ्य समस्या बताइन् । नर्सले मेडिकल अफिसर र स्टाफ नर्सले ईसीजी गरे । त्यसपछि ग्याष्ट्रिक भएको अनुमानमा ‘प्यान्टोपराजोल’ र ‘बुस्कोपान’ सुईद्वारा दिए । मुटुको समस्या होकी भन्दै नर्स र मेडिकल अफिसरले ‘कार्डियाक इन्जाइम’ परीक्षणका लागि उषाको रगत निकालेर पठाए । रामकृष्णले भने ‘उनलाई बान्ता आउला जस्तो भयो ।’ पिसाब पनि जाँच गर्नु पर्ने भएपछि उनी बेडबाट उठ्न लाग्दा अचानक बेहोस भइन् ।
त्यसपछि मेडिकल अफिसरको मात्रै डियुटी भएकाले एनेस्थसिस्ट डा. रामभक्त कोजुलाई फोन गरेर समस्या बताइयो । उनको श्वासप्रश्वास सहज र थप उपचारको लागि आईसीयुमा लगेर भेन्टीलेटरमा राखियो । अस्पतालका कन्सलट्यान्ट चिकित्सक सहिद गंगाल हृदय रोग केन्द्रमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रोशन रावत, फिजिशियन डा. प्रदिप वैद्य आए ।
तर, उनीहरुले उपचार सुरु गरेको एक घण्टा नवित्दै उषाको धड्कन चल्न छाडिसकेको थियो । चिकित्सकहरुले अचानक हुने हृ`दयघातबाट उनको मृत्यु भएको बताए । रातको समयमा भएको यस घ टनापछि रामकृष्णका परिवार, उषाको माइती लगायत सबैतिर स न्नटा छायो । हिँडेर अस्पताल पुगेको मानिसको एक्कासी मृत्यु भएपछि आफन्तहरु बुधबार बिहानैदेखि नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा धर्ना दिए ।
केही आक्रोशित युवाहरुले अस्पतालको इमरजेन्सी कक्ष, नर्स स्टेशन, टिकट काउण्टरमा तो ड्फो ड पनि गरे । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमीले तो डफो डमा संग्लन भएको भन्दै कृष्ण भुजेल र सिताराम कार्कीलाई प क्राउ गरेको छ । अस्पताल प्रशासन र मृ​_​_तकको परिवारको सहमतिपछि बुधबार अबेर उषाको श व अन्तिम संस्कारको लागि लगियो ।
नेपालमा केही वर्ष यता यस्ता घ टना बढीरहेका छन् । ओम अस्पताल, न्युरो अस्पताल, भरतपुर अस्पतालहरुमा पनि यस्ता घ टना सुन्नमा आएका छन् । नागरिक अस्पतालमा समेत यस्तो प्रकृतिको घ टना दोहोरिएको छ । गतवर्ष एकजना महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्तले अस्पतालमा धर्ना दिएका थिए । यस्तै समस्या दोहोरीरहने हो भने बिरामीको उपचार गर्न डाक्टर र अस्पताल पछाडी हट्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
अर्को तर्फ चिकित्सकको लापरबाही हो भने बिरामीले अस्पताल जानै डराउनु पर्ने समय आउन सक्छ ।त्यसको लागि सरकारले घ टनाको सत्य तथ्य छा नविन गरि दो षिमाथि का रबा ही गर्नु पर्दछ । हैन भने अस्पताल वा बिरामी जहाँ र जतिबेला पनि ग लत ह र्कतको सिकार बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।
Prev९ लाख बाती बलेको फोटोलाई हातले छुनुहोस र ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस, सारा दुख पाप काटिनेछ र लक्ष्मी प्राप्ति हुनेछ !
Nextश्रीमती सा टासा ट गर्न लागेपछि भयो यस्तो नसोचेको घ टना (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ‌ं प्रवेश गर्न खोज्ने ७ हजार बढी सवारी साधन र १९ हजार चार सय यात्रु नाकाबाटै फिर्ता
नेपाली ‘साथी’ मिलेर मलेसियामा धीरेन्द्रका खुट्टा का’टिदिए, सापटी दिएको पैसा फिर्ता माग्दा यस्तो भयो